Philips Avance Collection Airfryer HD9654 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Avance Collection Airfryer HD9654
Philips Avance Collection Airfryer HD9654
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Warranty:2Years With Philips XXL Airfryer, you can make delicious fried food with up to 90% less fat! Not only can this new model fry food with less... [Learn more]
Brand: PHILIPSFilter by: Airfryers, HCAK
With Philips XXL Airfryer, you can make delicious fried food with up to 90% less fat! Not only can this new model fry food with less oil but it can also remove and capture excess fat thanks to Twin TurboStar technology.
သင့်ရဲ့ အစားအစာတွေကနေ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ အဆီဓာတ်တွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖယ်ရှားပြီး အရသာရှိတဲ့ ဆီကြော်အစားအစာတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Philips အမှတ်တံဆိပ် XXL အရွယ်အစားရှိ Airfryer ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကို ဆီနည်းနည်းနဲ့ ကြော်လို့ရရုံတင်မကဘဲ ပိုလျှံနေတဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်အောင် Twin TurboStar နည်းပညာသစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ 2225 W ရှိ စွမ်းအားပြည့် Heater နဲ့ Twin TurboStar နည်းပညာတို့ပေါင်းစပ်ပြီး ပူပြင်းတဲ့ လေထုကို Airfryer ထဲမှာ လှည့်ပတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်လာသမျှ အဆီပိုအားလုံးဟာ စက်ရဲ့အောက်ခြေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆီစစ်ကန်ကနေ ထွက်ကျသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့အတွက် ကြက်တစ်ကောင်လုံးကိုပါ ထည့်ကြော်နိုင်ပြီး အာလူးချောင်း ၁.၄ ကီလို လောက်အထိ ထည့်ကြော်နိုင်ပါတယ်။ စက်နဲ့သင့်တော်မဲ့ အခြားသောဟင်းလျာတွေကို Philips NutriU အက်ပလီကေးရှင်း အသုံးပြုပြီး ကြည့်ရှုကြော်လှော်နိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အကြော်အိုးတွေနဲ့ လုံးဝမတူဘဲ သင်နဲ့ သင့်ရဲ့အိမ်သားတွေကို ဆီညှော်နံ့တွေကနေ ကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဆီလျော့နည်းတဲ့ အကြော်စာဟင်းလျာတွေကို စားသုံးနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ်အထိ ပေးထားပြီး စိတ်ချလက်ချနဲ့ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။